घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू माइकल अर्टेटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो माइकल आर्टिटाको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा, हामी ईतिहासको चित्रण गर्दछौं शस्त्रागार प्रेरित प्रबन्धक। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न यहाँ ग्यालरी उठाउनको लागि एउटा सानो झुकाव छ - माइकल अर्टेटाको बायोको एक सारांश।
माइकल आर्टेटाको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई व्यवस्थापकीय क्षमतामा उसको सम्भावनाहरू थाहा छ। तपाईं पनि धेरै बारेमा सुनेको छ माइकल आर्टेटा र मेसुत ओजिल बीच भिन्नता। यद्यपि हामी केहीलाई मात्र उसको जीवनको कथा थाहा छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
माइकल अर्टेटा बचपन कहानी - परिवार पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, माइकल आर्टेटा अमात्राइन स्पेनको तटीय शहर सान सेबेस्टियनमा मार्च १ 26 1982२ को मार्च २ XNUMX मा जन्म भएको थियो। ऊ आमा बुबामा जन्मेको थियो जसलाई उसले आर्सेनलको राम्रो भाग्य बदल्न पछि सम्भवतः संसारमा प्रकट गर्न सक्थ्यो।
माइकल अर्टेटा आमा बुबाको जन्म भएको थियो जसको बारेमा थोरै मात्र चिनिन्छ।
स्पेनको हिस्पैनिक जातीय समुदायको थोरै परिचित परिवारको उत्पत्ति स्यान सेबस्टियनको उनको जन्म शहरमा हुर्केको थियो जहाँ उनी आफ्नो सानो परिचित परिवारका सदस्यहरूसँग हुर्केका थिए। सान सेबास्टियनमा हुर्केकी बच्चा अर्टेटा बच्चाको बच्चा थिइन जब उनी असाधारण स्वास्थ्य अवस्थामा ग्रस्त थिए जसमा उसको मुटुले सफा रगतको सही आपूर्ति गरिरहेको थिएन। नतिजा स्वरूप, उनलाई आपतकालीन हृदयको शल्यक्रिया गर्नुपर्‍यो जुन स्पेनका केही चिकित्सकहरूलाई मात्र व्यावहारिक ज्ञान थियो।
"मलाई विश्वास छ म स्पेनमा पहिलो व्यक्ति हुँ जसले त्यो विशेष शल्यक्रिया गरेको थियो र डाक्टरहरूले भने कि म त्यो पछि कुनै पनि खेलकुद गतिविधि गर्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन।"
उनको आरम्भिक जीवन शल्यताको दुर्लभ प्रकृतिको अर्टेटालाई सम्झनुहोस्।
माइकल आर्टेटाले बच्चाको रूपमा जीवन बचाउने मुटुको शल्यक्रिया गरे।
यद्यपि, अर्टेटाको फुटबलको लागि सूजनको चाहना थियो कि उनका आमा बुबाले उसलाई खेलको आनन्द लिन रोक्न सकेनन्। यसैले, उनका बुबा र आमाले चिकित्सा विशेषज्ञहरूको परामर्श लिनुभयो कि यो जोखिम कति ठूलो हो भनेर निर्धारण गर्नका लागि किनभने अर्टेटाले फुटबलको लागि आफ्नो उत्कटतालाई कहिल्यै त्याग्ने थिएन।
“उनीहरू डराए कि कुनै दिन पिचमा खेल्दा मलाई केहि नराम्रो भयो। यद्यपि, मेरो मुटु वर्षौंको अवधिमा अझ बलियो भयो जबसम्म यो समस्याको विषय नै थिएन ”।
प्रकट गरिएको अर्टेटा।
माइकल आर्टेटा शिक्षा:
१ 8 1991 १ मा अर्टेटा XNUMX बर्षको उमेरमा उनले सान सेबास्टियनमा एन्टिगुओको भन्ने एमेच्योर युवा क्लबमा फुटबलमा आफ्नो क्यारियर निर्माण सुरु गरे। स्थानीय क्लबमा छँदा युवा अर्टेटाले फुटबलको उद्देश्य पत्ता लगाए, आफ्नो टेक्निकल फिन्सलाई सम्मान दिए र क्यारियरका लागि जुत्ता तयार गरे जसले उनलाई स्पेनको पछाडि टाढा लैजान्छ। यो एन्टिगुओकोमा पनि थियो कि अर्टेटाले आफ्नो मित्रतालाई पोषण गरे Xabi Alonso, एक स्थानीय सहकर्मीले पहिले उनीहरू बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा मैत्री बनाए। तत्कालीन युवाहरू जसले सीप र ब्रेभाडोको अविस्मरणीय प्रदर्शनमा संलग्न थिए अविभाज्य भयो र उही फुटबल टीमको लागि खेल्न दृढ संकल्प गरे।
पढ्नुहोस् ब्रान्डन रोडर्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
माइकल अर्टेटा र Xabi Alonso एक अर्कालाई सानै उमेरदेखि चिन्थे र एन्टिगुको युवा क्लबमा अविभाज्य थिए।
परिणाम स्वरूप, उनीहरूको निर्णय १००% पूर्वानुमान योग्य थियो जब दुबै स्थानीय क्लबमा क्यारियर निर्माण गर्न आमन्त्रित गरियो। मिडफील्डको बीचमा छेउछाउ उभिएर, अर्टेटा र एलोन्सोले एन्टिगुकोको लागि प्रत्येक खेलको टेम्पोलाई ठोकर दिए। तिनीहरूको उत्तीर्ण दायरा र सटीकता प्रशंसकहरू र प्रतिद्वन्द्वीहरूको लागि हेराईको लागि प्रभावशाली दृश्य थियो किनकि उनीहरूले आफ्नो युवा टीमलाई टूर्नामेन्ट पछि टुर्नामेन्टमा जित्न मद्दत गरे। अर्तेटा र एलोन्सो अन्ततः अलग भए जब बार्सिलोना देखि पूर्व रुचि आकर्षित भयो जबकि पछि रियल Sociedad गए।
माइकल अर्टेटा प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
धेरै जसो खेलाडी ब्यबस्थापक बनेको कहानीले जस्तै अर्टेटाको बार्सिलोनाबाट शुरु गरिएको फुटबल क्यारियर थियो जहाँ उनले क्लबको पहिलो टीममा कहिल्यै प्रवेश गरेनन्। यद्यपि उनले PSG मा loanण मा स्थिरता पाए र रेंजर्स संग महत्वपूर्ण सुधार रेकर्ड। २०० old मा आर्टिटा रियल सोसिआडाडमा सामेल भए जसको लागि उनले आफ्नो पुरानो पाल जाबी अलोन्सोसँग खेल्ने उमेरको चाहनालाई पूरा गर्न सकिए।
दुर्भाग्यवश, एलोन्सो लिभरपूलमा जानुभयो, यो विकास जसले दुवैले कहिले पनि एक साथ पेशेवरको रूपमा खेलेनन्। यी सबै कुरालाई समेट्न, अर्टेटा रियल सोसिआडाडमा आफूलाई स्थापित गर्न असफल भए तर २०० 2005 मा एभर्टनले हस्ताक्षर गरेकोमा खुसी भए। यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि अर्टेटाले खेलाडीको रूपमा उनको सफलता हासिल गरेका थिए, पहिलो फ्यान मनपर्ने बन्नेबाट र धेरै पुरस्कार प्राप्त गर्न को लागी।
एभर्टनमा फुटबल खेलाडीको रूपमा मिकेल अर्टेटाको सफलता थियो।
माइकल आर्टिटा जीवनी तथ्य - फेम कथा प्रख्यात:
आफ्नो प्रभावशाली ट्र्याक रेकर्डमा सवारी गर्दै, अर्टेटा आर्सेनलमा सामेल हुनुभयो र क्लबको कप्तान बन्नको लागि काम गर्नुभयो। तत्कालीन प्लेमेकरलाई उनका टीमका साथीहरूले "कोच" उपनाम पनि दिएका थिए किनभने निर्णयमा उहाँको निरन्तर हस्तक्षेपले उनीहरूलाई व्यवस्थापनमा जान दृढ संकल्प गरेको थियो। त्यसकारण यो आश्चर्यकर्मको कुरो थिएन कि अर्टेटा सामेल भयो पेप गार्डियोोलाको २०१ City मा उनको बुट झुन्डिए पछि मान सिटीमा ब्याकरूम स्टाफ।
माइकल अर्टेटाले आर्सेनलको निर्णय निर्णयमा निरन्तर हस्तक्षेप गरेर आफ्नो व्यवस्थापन आकांक्षालाई ज्ञात गर्‍यो।
यो ध्यान दिन पर्याप्त छ कि म्यान सिटीमा पेप गार्डियोलासँग काम गर्दा अर्टेटा पूर्ण विकसित प्रवन्धन भूमिकाको लागि तयार भयो किनकि पूर्वमा उनलाई निर्दयीता र स्थिरताको असफल कलामा ड्रिल गर्दछ। वास्तवमा, जब गार्डियोलाले अर्टेटालाई प्रिमियर लिग खेलमा आर्सेनलको बिरूद्ध खेल्ने टोली लिने र नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्प्यो, तब तत्कालीन सहायक प्रबन्धकले आफ्नो मालिकको अपेक्षा अनुसार वितरण गरे किनकि सिटीले आर्सेनललाई २-१ ले हरायो।
पढ्नुहोस् स्टीवन गेरार्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
पेप गार्डियोलाले आफ्नो पूर्व क्लब आर्सेनललाई हराउन शहरको टीमको प्रबन्धका लागि माइकल अर्टेटाको प्रशंसा गर्दै।
माइकल अर्टेटा बायो - ख्याति कथा माथि उठ्नुहोस्:
जब आर्सेन वेंजर २०१ 2018 मा राजीनामा गरियो, अर्टेटा एक सम्भावित प्रतिस्थापनको रूपमा साक्षात्कार थियो तर Unai Emery यसको सट्टामा छानिएको थियो। डिसेम्बर २०१ until सम्ममा एमेरीमा व्यवस्थापनको बागडोर लिन एमी टिमका कप्तान नियुक्त भएका थिए।
अर्टेटा लेख्ने समयको लागि छिटो अगाडी अझै आर्सेनलसँग आफ्नो व्यवस्थापकीय डेब्यू गर्न बाँकी छ। यद्यपि उनी विश्वभरका गनर्सले बुझेका छन् कि अभाववादी खेलाडीहरूले क्लबलाई १२०% दिन्छन् जुन विश्वव्यापी उपहासको पात्र बनेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्षम मानिस। द्वारा प्रकट गरिएको रियो फर्डिनान्ड, आर्टेटा आर्सेनलको टीममा जितेको छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
माइकल अरटेटा आर्सेनल एफसीको लामो हराएको महिमा पुनर्स्थापना गर्न सल्लाह दिइयो।
माइकल आर्टेटा पत्नी र बच्चाहरू:
प्रत्येक महान प्रबन्धक पछाडि एक सुन्दर र हेरचाह पत्नी छ र माइकल Arteta कि विभाग मा अभाव छ। वास्तवमा, म्यानेजरले भेट गरे र उनको अविश्वसनीय ग्लैमरस पत्नी - लोरेना बर्नाललाई २००२ मा डेटि began गर्न थाले।
माइकल अर्टेटाले २००२ मा उनकी प्रेमिका बनेकी पत्नी - लोरेना बर्नाललाई डेट गर्न शुरू गरे।
लोरेना एक स्पेनिश मोडल, अभिनेत्री र टिभी प्रस्तुतकर्ता हुन् जुन अर्जेन्टिनामा जन्मिएकी थिइन तर अर्टेटाको जन्म सहर-सेबास्टियनमा हुर्केकी थिइन। लोरेना १ 17 बर्षको उमेर सम्म, उनले जानमा आयोजित "मिस स्पेन" सौन्दर्य प्रतियोगिता, र 'मिस वर्ल्ड' प्रतियोगितामा शीर्ष १० फाइनलमा प्रवेश गरे।
लोरेनाको अगाडि कुनै प्रेमिका थिएन भनेर चिनिने अर्टेटाले उनलाई १ July जुलाई २०१० मा गाँठो बाँध्नु अघि उनको years बर्ष सम्म डेट गर्‍यो। उनीहरूको विवाहमा तीन छोरा छन्। तिनीहरूमा गेब्रियल (जन्म २००)), डानियल (जन्म २०१२) र सानो ओलिभर (जन्म २०१ 8)।
माइकल अर्टेटा र उनकी श्रीमती लोरेना जुलाई २०१० को १th तारिखमा विवाह गरेका थिए।
माइकल आर्टेटा पारिवारिक जीवन:
प्रत्येक परिवारसँग भन्नको लागि एउटा कहानी हुन्छ विशेष गरी जब तिनीहरूको अफशूट अर्टेटा जस्तो प्रसिद्ध हुन्छ। हामी तपाइँको व्यवस्थापकको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा उसका आमा बुबाआमाबाट तथ्यहरू ल्याउँदछौं।
माइकल अर्टेटाको तत्काल परिवारको बारेमा: के तपाईंलाई थाहा छ अर्टेटा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको बारेमा विवरण खुलाउन ठूलो छैन? एक haystack मा एक सुई फेला पार्न सजिलो छ तस्वीरहरु आफ्नो सामाजिक मिडिया पृष्ठहरु मा प्रबन्धकको पारिवारिक जीवन संचार भन्दा। न त उसले आफ्नो आमा र बुबाको बारेमा अन्तर्वार्ताहरूको बारेमा कुरा गर्छ। यसप्रकार, उनको परिवारको जरा सहित प्रबन्धकको बुबा र आमाको बारेमा थोरै थाहा छ। त्यस्तै गरी, कुनै भाइ वा बहिनीको सम्भावित अस्तित्व यो जीवनी लेखेको समयमा अनुमानको कुरा हो।
माइकल अर्टेटा आमा बुबा द्वारा हुर्काएको थियो जसको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात छ।
माइकल अर्टेटाका आफन्तहरूका बारे: अर्टेटाको विस्तारित पारिवारिक जीवनमा अघि बढ्दै, आफ्नो पुर्खाको कुनै रेकर्डहरू छैन विशेष गरी उनका बुवा हजुरआमाका साथै आमाबुवा र हजुरआमाको। त्यस्तै, प्रबन्धक काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भतिजी अझै अज्ञात छन्।
पढ्नुहोस् Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Mikel Arteta व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु:
व्यक्तित्व लक्षणहरू जसले माइकल अर्टेटा परिभाषित गर्दछ मेष राशि चक्रका संकेतहरू हुन्। तिनीहरू निर्दयी प्रतिस्पर्धा र स्थिरता को लागी आफ्नो चाल शामिल छ। थप रूपमा, उनीसँग एक दृढ व्यक्तित्व छ र सायद उसको निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा विवरणहरू प्रकट गर्दछ।
अर्टेटाको रुचि र शौकहरूको सन्दर्भमा, उहाँसँग धेरै मनोरन्जन गतिविधिहरू छन् जसमा संगीत सुन्नु, टेनिस खेलहरूसँगै राख्नु, चलचित्र हेर्नुका साथै साथीहरू र परिवारसँग समय बिताउनु समावेश छ।
माइकल अर्टेटा टेनिस मन पराउँछ र खेल संगै रहन्छ। उनी यहाँ टेनिस प्रशिक्षण अदालतमा राफेल नडाल संग चित्रित छन्।
माइकल आर्टिटा जीवन शैली तथ्यहरू:
के तपाईंलाई थाहा छ मिकेल आर्टेटाको लेख्ने समयमा १$ मिलियन डलरको कुल सम्पत्ति छ? प्रबन्धकको स्थिर बढ्दो धनसँग फुटबल प्रबन्धक हुनको लागि उसले प्राप्त गरेको ज्याला र तलबमा स्रोतहरू स्थापना गर्दछ।
यद्यपि, अर्टेटाले रूढीवादी जीवनशैली बिताउँदछ जसले गर्दा उसको खर्च गर्ने बानीलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुन्छ। नतिजा स्वरूप, उनीसँग भएका घरहरू बारे थोरै मात्र थाहा छ। यस्तै कारहरू जुन उनले लन्डनको सडकहरू नेविगेट गर्न प्रयोग गर्थे कारहरूका बारे पनि भन्न सकिन्छ आर्सेनलको नयाँ प्रशिक्षकको रूपमा।
हो, माइकल अर्टेटा रूढीवादी जीवनशैली बिताउँछिन्, उनको श्रीमतीको बारेमा पनि यस्तै भन्न सकिदैन। छवि
माइकल आर्टिटा अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो माइकल अर्टेटा बचपनको कथा र जीवनी समेट्न हामी तपाईंलाई उसको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दतको लागि म्यानेजरको बारेमा कम वा थोरै ज्ञात तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछौं।
धर्म: अन्तर्वार्तामा उनी कम धार्मिक हुन्छन् भन्ने तथ्यले अर्टेटा धर्मको पक्षमा छैन। न त ऊ धार्मिक समारोहमा क्यामेरामा कैद गरिएको छ। जे होस्, यो पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकिदैन कि ऊ विश्वासी हो वा हैन।
ट्याटूहरू: कोच व्यवस्थापकहरूको राम्रो पुरानो स्कूलसँग सम्बन्धित छ जसले प्रख्यात भए पछि ट्याटू प्रमोट गरेनन्। अर्टेटा को लागी, उनको उचित उचाईfफिट inches इन्च सम्मान प्रेरणाको लागि पर्याप्त छ।
फोटो प्रमाण छ कि माइकल Arteta लेख्ने समयमा कुनै ट्याटू छैन।
रक्सी र धुम्रपान: माइकल अर्टेटाको रूढीवादी जीवनशैलीका लागि धन्यवाद छैन, उहाँलाई धूम्रपान र पिउन दिइयो कि हुन्न भन्ने कुरा निश्चित रूपमा भन्न सकिदैन। हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ र एक बानीमा अत्यधिक मात्रामा यसलाई जोखिममा पार्नुहुन्न।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी पढ्नका लागि धन्यबाद आर्सेनल को प्रमुख कोच। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
स्पेनिश फुटबल डायरी